“Marka Mourinho Uu Kugu War Galiyo In Kursiga Keydka Aad Fadhido Waa Inaad Ixtiraamtaa”… Fariin Ku Socota Pogba – Gool FM
“Marka Mourinho Uu Kugu War Galiyo In Kursiga Keydka Aad Fadhido Waa Inaad Ixtiraamtaa”… Fariin Ku Socota Pogba
(England) 25 Abriil 2018 Ronaldinho ayaa u diray Pogba talooyin wax ku ool ah, sababa la xiriira inuu khilaaf kala dhexeeyo macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho. Isla markaana la filayo inuu dhamaadka xili ciyaareedkan ka baxo garoonka Old Trafford.
Wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in halyayga xulka qaranka Brazil uu kaga digay Paul Pogba in uu qaato go’aan uu kaga tagayo kooxda Manchester united, si uu ugu dhaqaaqo Paris Saint-Germain oo si xoogan u dooneysa.
“Waxaan ka codsanayaa Paul Pogba, inuu iska sii joogo Manchester united isla markaana uu iska diido u dhaqaaqista kooxda PSG xili ciyaareedka soo aadan”.
“Marka Jose Mourinho uu kuu sheego inaad kursiga keydka fadhin doonto, waa inaad ixtiraamtaa”.
“waxaan qabaa in Pogba uu wax badan ka baran karo Mourinho, sababtoo ah waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican adduunka”.
DEG DEG: Kaddib markii uu xulka Somaliya u soo baxay Finalka, Guddooomiyaha xiriirka kubbada cagta Afrika ayaa ballan qaaday in....
Yuu Xulka Soomaaliya la ciyaarayaa Final ka, Goormaase la ciyaarayaa????